Iindaba -Iinkonzo ezenziwe ngentando yakho, amava obuchule kunye namava atyebileyo
Kutshanje, iWuxi Innovate Machinery Development Co, Ltd. Igqibile ngemveliso yejel kunye neel emulsion kwimigca yokuvelisa iYangzhou Runlian Medical Equipment Co, Ltd. kunye nemveliso yokuthambisa kunye neyokuthambisa yeHunan Zhongxinkang Medical Equipment Co, Ltd. Zonke umgca weprodction zonke zilungisiwe. Inikezelwe ngokusesikweni kumthengi ngo-Okthobha, kwaye umsebenzisi wabekwa ngokusemthethweni kwimveliso.
Iimpawu eziqhelekileyo zezi yunithi zimbini zinomthamo omkhulu, ezahlukeneyo kunye nendawo encinci. Ngokwimeko yomsebenzisi, iinjineli zethu ziyile isicwangciso esipheleleyo ekuqwalaseleni imisebenzi, iindleko, uyilo, ukusebenza, ukuthuthwa kunye nokungena. Yonke inkqubo yokusebenza ilula kwaye igudile, kwaye iintlobo ngeentlobo zeemveliso zinokuveliswa kwi-emulsifier yethu enemisebenzi emininzi ukuvelisa iimveliso ezigqityiweyo ezikumgangatho ophezulu, ezisombulula iingxaki zabathengi kwaye zihlangabeze ngokupheleleyo iimfuno zabathengi. Abasebenzisi bazele yindumiso kwinkampani yethu.
Kwaye kulo nyaka, ngenxa yobhubhane, ibango kwiimarike zangaphandle lehlile, kodwa safumana iiodolo kubathengi xa ubhubhane ubukubi kakhulu. Umyalelo we-Bangladesh wagqitywa nge-8th ka-Okthobha. Lo mthengi e-Bangladesh ngumenzi wedayi yeenwele. Emva kokucoca, umxholo weoksijini embizeni kufuneka ulinganiswe. Initrogen kufuneka igcwaliswe ngexesha lenkqubo yemveliso. Izixhobo zokucoca i-nitrogen ziyafuneka. Iinjineli zethu ziyila umatshini ngokomthengi'Iimfuno kunye nokuphelisa isidingo sezixhobo zokucoca i-nitrogen. Sikwabanika neevidiyo zokufaka kunye nenkxaso yetekhnoloji. Abathengi banelisekile kakhulu ngoomatshini kunye neenkonzo zethu kwaye bafikelele kwintsebenziswano yexesha elide.
I-Wuxi Innovate Uphuhliso loomatshini Co, Ltd. ijolise kwizixhobo zeshishini ngaphezulu kweminyaka elishumi. Iqokelele amava atyebileyo kwimveliso yekrimu, into yokuthambisa kunye nezixhobo zokuthambisa. Itekhnoloji ikhulile kwaye ibanzi. Uyilo ngalunye luyilelwe abasebenzisi. Abathengi banikezela ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu ngelixa kuyilwa isisombululo somsebenzi esisebenzayo kubathengi ukonga iindleko kunye nokwenza ngcono ukusebenza kakuhle